विचार-ब्लग – DhankutaKhabar
राजनीतिभन्दा शक्तिशाली रहेछ प्रेमः मदन भण्डारीकी छोरी कांग्रेस नेतृकी बुहारी !
मदन भण्डारी २०५० साल जेठ ३ गते दास ढुंगामा मारिए । उनी नेकपा एमालेका एमालेको महासचिव थिए । भण्डारीको हत्या हुँदा उनकी छोरी निशा कुशुम भण्डारी ५ वर्षकी थिइन् । … Read More... हेल्लो सरकार, सिउँदो पखालिन कहिले रोकिन्छ ?
आदरणीय नेतागण नमस्कार ! दश वर्ष भयो देशमा गणतन्त्र आएको । डेढ वर्ष हुन लाग्यो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको । सरकार बन्ने–भत्कनेको त कुरै नगरौं । यसबीचमा प्राय:तपाईंहरू सबैको राष्ट्रपति, … Read More... “नेपालको संविधान भनेको पृथ्वी नारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेश हो”: जगमान गुरुङ (कुराकानी सुन्नुहोस)
देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई संझीरहन आवश्यक छ र ? हाल लण्डनमा रहनुभएका संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङसंगको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। Read More... गर्भको छोरी तुहाउने, चाडबाडमा चेली चाहिने ?
एक सहकर्मी गर्भवती थिइन् । उनलाई डाक्टरले बडादशैंको फूलपातीको दिन आमा बन्ने समय तोकिदिएका थिए । उनी भने आफ्नै खालको पिरलोमा थिइन् । उनी भगवानसँग पूकारा गर्थिन्, ‘मेरो पहिलो बच्चा … Read More... राजनीतिक दलहरुबीच कुर्चीका लागि झगडा गर्दैछन् – डा भट्टराई
पोखरा, २० पुस । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अहिले पनि राजनीतिक दल कुर्चीका लागि झगडा गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । नयँं शक्ति पार्टी … Read More... बाबुरामलाई दीपकको कडा जवाफ-‘टोपी दिवस मनाउँदा, धोतीलाई किन समस्या ?’
काठमांडू – बाबुराम भट्टराईलाई कलाकार दीपकराज गिरीले फेसबुकमार्फत जवाफ फर्काएका छन् । कलाकार गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘बिहानै टोपी लगाएको फोटो हालेको बाबुरामजीले देखि सहेनन् ।’ टोपी दिवस मनाउँदा धोतीलाई … Read More... पूर्व राष्ट्रपतिकी छोरीले भनिन्- झुठो ,खोक्रो ,अन्धविश्वास र मतभेद हुने दिवस मनाएर राष्ट्रियताको खिल्ली नउडाऔं
काठमाडौं, १७ पुस । अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन, युवा युवतीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा ‘नेपाली टोपी दिवस’ मनाएका छन् । उनीहरुले शिरमा ढाका टोपी र हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्‍याली … Read More... Posts navigation